Akwụkwọ Marty Thompson Martech Zone | Peeji nke 2 nke 2
Mgbasa mgbasa ozi na mmekọrịta mmadụ na ibe ya bụ akụkụ dị mkpa nke otu ụlọ ọrụ si azụ ahịa. Ọ ghọwo nke nwere njikọ chiri anya ma jikọtara ya na mbọ ire ahịa anyị. Ndị na-ere ahịa dijitalụ enweghị ike ikwu maka ọdịnaya, SEO, njikarịcha weebụsaịtị, PR. Ndị ahịa, ma ha ghọtara ya ma ọ bụ na ha amaghị, ugbu a nwere ọrụ ọhụụ zuru oke iji rụọ n'ime ọnọdụ ụlọ ọrụ. Ha na-arụ ọrụ dị iche iche dị iche iche n'ọtụtụ n'ime ndị na-ere ahịa na-echekwa otu ihe mgbe ọ gbachiri nkịtị. Anyị dị ka ndị ahịa